पार्टी एकता प्रक्रिया माघ पहिलो सातासम्म टुंगिन्छ : बादल::kamananews
पार्टी एकता प्रक्रिया माघ पहिलो सातासम्म टुंगिन्छ : बादल
२७ पुस, वीरगञ्ज । नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले नेकपाको एकता प्रक्रिया छिट्टै टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् ।
नेकपा पर्साको पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले माघको पहिलो सातासम्ममा एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने बताएका हुन् ।
उनले भने ‘हामीलाई थाहा छ पर्सालगायत देशका केही जिल्लामा एकता प्रक्रियामा समस्या छ । एकता प्रक्रियाका बाँकी काम यही महिनामा पूरा गर्ने सोच पार्टीको छ, आशा छ यो महिना भित्र वा ढिला भएको खण्डमा माघको पहिलो सातासम्ममा एकताका बाँकी काम पूरा हुन्छ ।’
नेकपा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले समाजवाद निर्माण गर्दै साम्यवादसम्म पुग्नका लागि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा लिएको उनको तर्क छ ।
रोजी रोटीका लागि विदेशमा रहेका लाखौं दाजुभाई दिदी बहिनीहरुलाई नेपाल फर्काएर देशलाई विकसित बनाउने चाहना आफूहरुको रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रीबाट कुटिएका सचिव अस्पताल भर्ना
मन्त्रीबाट कुटिएका सचिव विद्यानाथ झा अस्पताल भर्ना भएका छन्। गाला, नाक र घाँटीसहित शरीरका विभिन्न भागमा चोट देखिएका सचिव झा रातिदेखि नै जनकपुरको केयर नर्सिंङ होममा भर्ना भएका हुन्। मन्त्रीको झापड र लात प्रहारबाट मुख र...
प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्ड जाँदै !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम)को वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन माघ ६ गते स्वीट्जरल्याण्ड जाने भएका छन्। सम्मेलन माघ ८ गते देखि ११ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको डाबोसमा हुँदैछ। ओलीले सम्मेलनको दुई सत्रमा...
गगन थापा लाई यसरी किक हाने देउवाले? छाया मन्त्रीका दाबेदारमा कोको छन् त?
काठमाडों । सरकारको निगरानी गर्न कांग्रेसले गठन गर्न लागेको छाया सरकारमा मन्त्री बन्न सांसदले उत्साहजनक सहभागिता देखाएका छैनन् । रुचि भएका तीनवटा मन्त्रालयको नाम मागेको ६ दिन हुँदासमेत ६३ मध्ये १० सांसदले मात्र नाम टिपाएका...
राजतन्त्रको भुत’सँग किन डराउँदैछन् ओली र प्रचण्ड ?
२९ पुस, काठमाडौं । यो साता राजनीतिक बजारमा दुईवटा ‘हट केक’ पाकिरहेका छन्ः पहिलो- डा.गोविन्द केसीको १६ औं अनसन । दोस्रो- विवेकशील साझा पार्टीमा देखापरेको विचलन । केकको अर्को चिसो पाटो पनि छ । प्रधानमन्त्री...
२८ पुस, ललितपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रलोभनमा पारेर धर्म परिर्वतन गर्ने क्रम जारी रहे मुलकमा धार्मिक युद्व हुने खतरा औल्याएका छन् । ललितपुरमा आयोजित सनातन हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना जनजागरण अभियानलाई सम्बोधन...
२८ पौष २०७५, काठमाडौँ, एकीकरणको सत्र महिना नपुग्दै विवेकशील साझा दल फुटेको छ। एकीकरणअघि विवेकशील नेपाली दलमा रहेका सबै केन्द्रीय सदस्य पार्टीबाट अलग भएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीका एक सह-संयोजक उज्वल थापाले नयाँ दल दर्ताका लागि...